Umshini Concentrator, Electroplated Paddle nokomisa, Blade nokomisa - Yanjialong
uchungechunge DW isendlalelo esisodwa ibhande dryer
umphumela Single anokungcola evaporator
Single umphumela anokungcola evaporator ukusetshenziswa: Lokhu imishini kufanelekile zemithi, yemvelo, ukudla, izimboni zamakhemikhali nezinye, futhi ngokuvamile sisetshenziswa for ukuhwamuka bendabuko ezikhishwe emithini yamaShayina, izithelo ayo, izixazululo esihle zamakhemikhali, njll Izici: a. isakhiwo Ihlangene futhi endaweni encane phansi. Precision wokucwebezelisa ngaphakathi nangaphandle imishini, ngekuhambisana netidzingo GMP. b. Imishini ngokuyinhloko yakhiwe heater, a isihlukanisi, a defoamer, epholisayo nokunye okunjalo. c ....
YZGFZG uchungechunge cleaner dryer
YZG / FZG uchungechunge cleaner dryer Isingeniso: okuthiwa cleaner omiswe ukomisa impahla ngaphansi kwezimo cleaner, futhi uma futha cleaner isetshenziselwa uzotshala kanye dehumidifying, izinga omiswe yanda. Qaphela: Uma epholisayo isetshenziswa, uketshezi asendabeni kungenziwa zibuyiswe yi epholisayo; uma SK amanzi uchungechunge indandatho cleaner futha isetshenziswa, lo epholisayo engashiywa, ulondoloza amandla utshalomali. incazelo yomkhiqizo: YZG / FZG uchungechunge cleaner dryer kungokwalabo static cleaner dryer. I dr ...
Umshini decompression concentrator
Umshini decompression concentrator Okokuqala, kwenkululeko isicelo Lokhu imishini kufanelekile lokuhlushwa uketshezi kule zemithi, ukudla, amakhemikhali kanye nezinye izimboni, futhi ingasetshenziswa njengendlela utshwala yokutakula futhi elula Reflux isizinda. Izingxenye nabo zokudlala ezenziwe ngensimbi engagqwali, esesikhundleni ezinhle ukugqwala ukumelana naso futhi kwenze kuyahlangabezana nezindinganiso GMP. Okwesibili, ukwakheka imishini I imishini ngokuyinhloko yakhiwe lokuhlushwa ithangi umzimba omkhulu, a umusi liquid ...
Double umphumela concentrator
Double umphumela concentrator Okokuqala, kwenkululeko isicelo I concentrator kufanelekile lokuhlushwa uketshezi ezifana imithi yamaShayina, imithi yasentshonalanga, glucose, isitashi, monosodium glutamate, imikhiqizo yobisi, amakhemikhali, njll, futhi Isiza lokushisa ongaphakeme cleaner lokuhlushwa ukushisa izinto ezizwelayo. Ngemva ukubala ngokucophelela kanye nomklamo ngokucophelela, inkampani yethu ine izinzuzo ezingaphezu kuka izici yasekuqaleni. Okwesibili, imishini Ukwakheka I kabili umphumela ...
Three-umphumela concentrator Okokuqala, kwenkululeko isicelo I concentrator kufanelekile lokuhlushwa uketshezi ezifana imithi yamaShayina, imithi yasentshonalanga, glucose, isitashi, monosodium glutamate, imikhiqizo yobisi, amakhemikhali, njll, futhi Isiza ongaphakeme lokushisa cleaner lokuhlushwa ukushisa izinto ezizwelayo. Ngemva ukubala ngokucophelela kanye nomklamo ngokucophelela, inkampani yethu ine izinzuzo ezingaphezu kuka izici yasekuqaleni. Okwesibili, imishini Ukwakheka esiyimitha umphumela c ...
concentrator eyisiyingi Okokuqala, kwenkululeko isicelo Lokhu imishini kufanelekile lokuhlushwa uketshezi kule zemithi, ukudla, amakhemikhali kanye nezinye izimboni, futhi ingasetshenziswa njengendlela utshwala yokutakula futhi elula Reflux isizinda. Izingxenye nabo zokudlala ezenziwe ngensimbi engagqwali, esesikhundleni ezinhle ukugqwala ukumelana naso futhi kwenze kuyahlangabezana nezindinganiso GMP. Okwesibili, ukwakheka imishini I imishini ngokuyinhloko yakhiwe lokuhlushwa ithangi umzimba omkhulu, a isihlukanisi umusi liquid, ...
Ikhoyili cleaner concentrator Okokuqala, kwenkululeko isicelo Idivayisi kufanelekile lokuhlushwa izinto eziwuketshezi ezifana imithi yamaShayina, imithi yasentshonalanga, ukudla, monosodium glutamate, avalele, glucose, isitashi, ujusi, amakhemikhali kanye nokunye okufana nalokho. Okwesibili, imishini Ukwakheka Idivayisi kuyinto ukubekwa uphawu kudivayisi cylindrical nge ezishisayo ukwahlukanisa jacket, okuyinto vacuumed nge elula nephumelelayo ejector wokubacindezela. Imishini ihlukaniswe yaba izingxenye ezintathu, chambe ukuhwamuka ...
Utshwala yokutakula concentrator
Utshwala yokutakula concentrator Okokuqala, kwenkululeko isicelo Lokhu imishini kufanelekile zemithi, yemvelo, ukudla, amakhemikhali kanye nezinye izimboni. It livame ukusetshenziswa ukuhwamuka bendabuko ezikhishwe emithini yamaShayina, izixazululo esihle zamakhemikhali, njll Isiza ukuhwamuka futhi nokuvulwa ezihogelwayo. Okwesibili, ukwakheka imishini I imishini ngokuyinhloko yakhiwe heater, i evaporator, a defoamer, epholisayo double, kuthe ukuphola, a eyamukelayo ketshezi ta ...
Isimiso sokusebenza se-evaporator yemiphumela emithathu yamanzi anosawoti aphezulu
I-evaporator enemiphumela emithathu uhlobo lomshini wokukhipha nowokuhlunga, osetshenziswa kakhulu enqubeni yokuhwamuka nokugxila kwezinto zokwenza uketshezi ezifana nemithi yokwelapha, amakhemikhali, ukudla, kanye nemboni elula. Isikhathi sokushisa ngokomzimba sifushane, isivinini sokuhwamuka siyashesha, t ...
Imakethe ye-oxygen cylinder kanye ne-concentrator izobona ukukhula okuphezulu kakhulu emhlabeni ngo-2019-2025
Amathemba emakethe wama-oxygen cylinders kanye nama-concentrator, ukuhlaziywa okuphelele kanye nezingxenye ezinkulu zemakethe nezibikezelo, ngo-2019-2025. Amasilinda e-oksijini nemibiko yemakethe ye-concentrator angumthombo obalulekile wedatha yosomaqhinga bebhizinisi. Inikeza ukuhlaziywa kwemakethe embonini ngaphezulu ...
Ukuhlaziywa nokuqhathaniswa kwezinzuzo nobubi bokuwa kwama-evaporator wamafilimu
Ukuwa kwefilimu evaporator uhlobo lwemishini yokuhwamuka esebenza kahle kakhulu, ebizelwa ndawonye ngokubizwa ngokuthi yi-thin film evaporator kanye nokukhuphuka kwefilimu evaporator kanye ne-scrap film evaporator. Izacile amafilimu evaporators anezinzuzo ezibalulekile futhi asetshenziswa kakhulu kumakhemikhali, umkhakha wokukhanya naku-foo ...
Umgomo wokusabalalisa okuphoqelelwe kwe-evaporator
I-evaporator yokusetshenziswa okuphoqelelwe yi-evaporator ethembele emandleni angaphandle okusabalalisa. I-evaporator yokusetshenziswa okuphoqelelwe ifaneleka kakhulu ekuhwamukeni kwe-crystallinity, ukungcola, ukuminyana okuphezulu, i-viscosity ephezulu, kanye namanzi angcolile angaqinisi futhi angcolile. gxila. ...
Ubukhona nomsebenzi we-MVR evaporator
I-MVR evaporator wuhlobo olusha lwempahla yokusebenza kahle kakhulu nokonga amandla okusetshenziswa kakhulu embonini yezemithi. Le mishini isebenzisa ubuchwepheshe obushisayo obushisayo obuphansi futhi obuphansi kanye namandla ahlanzekile ukukhiqiza umusi njengamandla wokwehlukanisa amanzi phakathi. Kuyi ...
© Copyright - 2010-2022: Wonke Amalungelo Agodliwe. Okufakiwe Products - Zezıhlabane Tags - Sitemap.xml - AMP Hambayo
Single Effect Umshini Concentrator, Layer Single Mesh Belt nokomisa, kabili Effect Concentrator , Single Effect Concentrator ,
I-Nihe Zhenglu Town, i-ChangzhouCity, JiangsuProvince